ဂိုဘီသဲကန္တာရ (/ˈɡoʊ.bi/)သည် အာရှတိုက်တွင် တည်ရှိသော ကြီးမားသော ကန္တာရ (သို့) ဆူးချုံနွယ်ထူသောဒေသ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မန်ဒရင်းတရုတ်ဘာသာဖြင့် ဂိုဘီ (戈壁)မှာ ချုံနွယ်ထူဒေသဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ၎င်းသည် မြောက်ပိုင်း နှင့် တရုတ် အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသ အချို့နှင့် မွန်ဂိုလီးယားတောင်ပိုင်းဒေသတို့ကို ဖုံးလွှမ်းထားသော ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ကန္တာရဖြစ်သည်။ ဂိုဘီ၏ ကန္တာရချိုင့်ဝှမ်းလွင်ပြင်အား မြောက်ဘက်တွင် မွန်ဂိုလီးယား ကုန်းမြင့်လွင်ပြင်နှင့် မြက်ခင်းပြင်များ၊ အယ်လ်တိုင်း တောင်များ၊ အနောက်ဘက်တွင် တာကလာမာကန် ကန္တရ၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ဟက်ဆီကုန်းတန်းနှင့် တိဘက် ကုန်းမြင့်၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် အနောက်တရုတ်လွင်ပြင်တို့က ဝန်းရံထားသည်။ ဂိုဘီ သဲကန္တာရသည် မွန်ဂို အင်ပါယာကြီး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့် ပိုးလမ်းမတလျောက်ရှိ အရေးပါသော မြို့များ တည်ရှိသဖြင့် သမိုင်းတွင် ထင်ရှားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့် အနောက်မြောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးလွှမ်းထားပြီး တောင်ပိုင်းမွန်ဂိုလီးယားအထိ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ကန္တာရဖြစ်သည်။
Gobi Desert (Говь)
Bayankhongor, Dornogovi, Dundgovi, Govi-Altai, Govisümber, Ömnögovi, Sükhbaatar
၁,၅၀၀ km (၉၃၂ mi), SE/NW
၈၀၀ km (၄၉၇ mi), N/S
၁,၂၉၅,၀၀၀ km2 (၅၀၀,၀၀၂ sq mi)
ဂိုဘီကန္တရသည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် မွန်ဂိုနိုင်ငံကြားတွင် တည်ရှိသည်။
ဂိုဘီသဲကန္တာရသည် မြောက်ဘက်တွင် မွန်ဂိုလီးယားမြက်တောများနှင့် မြေညီ၍ သစ်တောမရှိသော မြက်ခင်းပြင်၊ အနောက်ဘက်တွင် Taklamakan ကန္တာရ၊ Hexi စင်္ကြလမ်း၊ အနောက်တောင်တွင် တိဗက်ကုန်းပြင်မြင့်၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တရုတ်မြောက်ပိုင်းလွင်ပြင်တို့ဖြစ် ဝန်းရံထားသည်။ ဂိုဘီသဲကန္တာရသည် မွန်ဂိုအင်ပါယာနှင့် ပိုးလမ်းမကြီးရှိ များစွာသောအရေးပါသောမြို့များကြောင့် သမိုင်းတွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှ ဂိုဘီသဲကန္တာရအထိ တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်မှမိုးရိပ်ပုံစံရာသီဥတုမျိုးရရှိသည်။ ဂိုဘီ သဲကန္တာရသည် တိဘက် ကုန်းမြင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဓရာမှ ရေခိုးရေငွေ့များ ဂိုဘီ ဒေသသို့ မရောက်ရှိအောင် ကာဆီးထားသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော မိုးခေါင် ကန္တာရတစ်ခုဖြစ်သည်။
Sternberg, Troy (2015-01-26). "Contraction of the Gobi Desert, 2000–2012" (in en). Remote Sensing7(2): 1346–1358. doi:10.3390/rs70201346.
Owen Lattimore. (1973) "Return to China's Northern Frontier". The Geographical Journal, Vol. 139, No.2(June 1973), pp. 233–242.
Cable, Mildred and French, Francesca (1943) The Gobi Desert Landsborough Publications, London, OCLC 411792.
Man, John (1997) Gobi: Tracking the Desert Yale University Press, New Haven, ISBN 0-300-07609-6.
Stewart, Stanley (2001) In the Empire of Genghis Khan: A Journey among Nomads HarperCollins Publishers, London, ISBN 0-00-653027-3.
Thayer, Helen (2007) Walking the Gobi: 1,600 Mile-trek AcrossaDesert of Hope and Despair Mountaineer Books, Seattle, WA, ISBN 978-1-59485-064-6.
Younghusband, Francis (1904) The Heart ofaContinent, John Murray.
Wikimedia Commons တွင် Gobi Desert နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။